အိပ်မက်ပြခန်း: January 2009
အချိန်တွေကို ပြန်ကြည့်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က ။ ကျွန်တော် စတုတ္တနှစ်ကျောင်းသားဘ၀၊ ကျောင်းမှာထုံးစံအတိုင်း Fresher welcome ပွဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေလိုမဟုတ်တာက အမြင့်နှစ်ပေ အလျား ၁၂ ပေနဲ့အနံ ၆ ပေလောက်ရှိတဲ့ စင်မြင့်လေးကို ကိုယ့်မေဂျာရဲ့ ၀ပ်ရှော့ထဲမှာပဲ ယာယီလုပ်ပြီး ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အခမ်းအနား အစအဆုံးကို တာဝန်ယူတာကတော့ အမြဲတမ်းပါနေကြ ကျွန်တော်တို့ ငပွကြီးအဖွဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း တခြားအချိန်ဆို ရင်သာ ဌာနကို မရောက်ရင် မရောက်မယ် ဒီလိုပွဲမျိုးနီးလာပြီဆိုရင်တော့ အစာသုံးရက်လောက် မစားရတဲ့ ကြောင်နာရုပ်လေးတွေနဲ့ ဆရာတွေ ဘာပြောပြော ဘာခိုင်းခိုင်း ဟုတ်ကဲ့ ခင်ည ဟုတ်ကဲ့ ခင်ည သွားသွားလုပ်ကြပါတယ်။ အလုပ်တာဝန်ခွဲယူဖို့၊
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတွယ်ကပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ရင်းနှီးနေကျလူတွေပဲကောင်းတာကိုး။ ဒီတော့ နှစ်တိုင်းတာဝန်ယူနေကြ အဖွဲ့တွေပဲစုပြီးလုပ်ရတော့တာပေါ့။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ စင်လေးကလည်း မကြီးပေမယ့် ခမ်းနားအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ကျောင်းသားရေးရာက အမတွေကို သွားပြောပြီး ကျောင်းက ကျောက်ခက်ပန်းအိုးကြီးတွေကို ခုံရဲ့ရှေ့မှာထား မီးချောင်းတွေနဲ့ အလင်းပေး၊ ပူဖေါင်းတွေ ဘာတွေနဲ့အလှဆင်လိုက်တော့ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲဗျ...။ ကိုယ်ဆောက်တဲ့ ဇာတ်စင် ကိုယ်ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာပေါ့လေ..။
စင်လေးက ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ Fresher welcome ပွဲတွေမှာ ပါနေကျ King နဲ့ queen ရွေးဖို့၊ ပြီးတော့ အဲ့လိုရွေးဖို့အတွက်ကို ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးတွေကို စင်ပေါ်တက်ပြီး တစ်ယောက်ချင်း အကြမ်းအား ဖြင့် မိတ်ဆက်ခိုင်း ဖို့ပါ။ အရင်တုန်းကတော့ civil မေဂျာဆိုရင် အများဆုံးမှ တစ်နှစ်ကို ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မခေါ်လို့ဒီလို မိတ်ဆက်ခိုင်းတာအဆင်ပြေပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေသာ ဒီလိုလုပ်ရရင် Fresher welcome ကို လေးရက်လောက်ခွဲလုပ်ရမယ်ထင်တယ်။ ကျောင်းသားခေါ်ချက်က civil ဆိုလျှောက်သလောက် ပေးလိုက်လို့ အမိန့်တော်မြတ်ချမှတ်ထားတာကိုး...။ ထားတော့ ဒါတွေက။ ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဗျ ပြောရင်းနဲ့လမ်းကချော်ချော်ထွက်သွားတတ်တယ်။
အဲ့လိုမျိုး မိတ်ဆက်ခိုင်း၊ ဂိမ်းတွေ ကစားခိုင်းတာအပြင် အဓိကကျတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ သီချင်းဆိုကြဖို့ပါ ။ ဒီနှစ်မှာ စင်မြင့်နဲ့ သီချင်းဆိုရမယ် လည်းကြားရော စာရင်းလာပေးလိုက်ကြတာ ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ် စာလောက် ရှိမယ်ထင်တယ်။ဒီတော့ လာသမျှလူတိုင်းကိုလည်း ဆိုခိုင်းဖို့ရာ က မဖြစ်တော့ ပထမဦးစားပေး အနေနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား အသစ်လေးတွေ၊ ပြီးမှ နောက်ကျန်တဲ့ အတန်းတွေကိုတော့ မီးစင်ကြည့် ကကြမယ် ဟ ဆိုပြီး စီစဉ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ သူမဆိုနဲ့ သူဆို လို့ပြောလိုက်ရင်လည်း အကုန်လုံးက ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း မျက်နှာနာနေကြတော့ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးထား လိုက်ရတော့တယ်။
"မင်း ဒီနှစ်ဘာသီချင်းဆိုမှာလဲ ဖားကြီး" ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကမေးလာပါတယ်။
"အရင် နှစ်တွေနဲ့ မတူအောင်တော့ ဆိုမယ်ကွာ"
"ဘာ မတူအောင်လည်း မင်းက ဟစ်ဟော့ပဲ ဆိုပေါ့... မြူးမြူးကြမ်းကြမ်း သာဆိုကွာ အဲ့ဒါမှ ပွဲစည်မှာပေါ့"
"ဟာ... မင်းကလည်း အခု ကာရာအိုကေ ထွက်ထားတဲ့ ဟစ်ဟော့တွေကို ငါအားမရဘူးကွာ"
"ဖားကြီးကလည်း ရှိတာဆိုပေါ့ကွာ... ကြီးကျယ်မနေပါနဲ့"
" ငါကဟစ်ဟော့ဆို eminem တို့ Dr.Dre တို့လောက်မှ rapper ထင်တာကွ"
"ဖြစ်ရမယ်... မင်းကတော့ လူကသာ ဘာမှသောက်သုံးမကျတာ"
"အေး သောက်သုံးမကျသေးရင် ကြည့်လိုက်ကွာ အဲ့ဒီ့နေရောက်ရင် ငါဘာဆိုမလဲဆိုတာကို"
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို ကျွန်တော်က စိန်ခေါ်သလိုလိုနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ဟစ်ဟော့သီချင်းတွေအပေါ် ရင်ခုန်မူ့မကုန်ဆုံးသေးတဲ့အချိန်။ ပြောရရင် အမေရိကန်က ဟစ်ဟော့ သီချင်းတွေကိုမှ ဆိုချင်နေတာ။ ဒါပေမယ့် စာရွက်ကြည့်ဆိုတာတောင် လျှာက မလိုက်နိုင်လို့ စိတ်လျှော့လိုက် ရတယ်။ ဒီနှစ်တော့ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘာသာ သီချင်းရေးပြီး ဆိုမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ရက်ကလည်း အရမ်းနီးနေပြီ ဆိုတော့ တီးလုံးကတော့ ကျွန်တော့်ညီ သူငယ်ချင်း rapper လေးဆီက အကူအညီတောင်းရပါတယ်။ ရမယ့်ရတော့ မနက်ဖြန် ပွဲတော်ရက်ဆိုရင် ဒီနေ့လို ညမှ တီးလုံးက ကျွန်တော့် လက်ထဲရောက်ပါတယ်။ ပွဲတစ်ခုလုပ်ရင် ကျောင်းမှာနေတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ ရန်ကုန်က ကိစ္စ တွေစီစဉ်တဲ့ အဖွဲ့ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တော့ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်အဖွဲ့ထဲမှာပဲ နေလိုက်ပါတယ်။ ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါ
ဘူး စားသောက်စရာကိစ္စတွေ စီစဉ်ပြီးရင် အိမ်ပြန်လို့ရတော့ ကျွန်တော်သီချင်းရေးမလို့ပါ။ ကျောင်းမှာ နေရတဲ့ အဖွဲ့တွေကတော့ ပင်ပန်းလားဆိုရင်တော့ ဒီလိုပါပဲ..။ သူတို့လည်း စင်ကို ဟိုပြင်ဒီပြင် လုပ်ပြီးရင် တစ်ညလုံး သောက်ပွဲတော် ကျင်းပကြပါတယ်။
သီချင်းကို တစ်ညတည်းနဲ့ အပြီးရေးလို့ မင်းတို့ဟစ်ဟော့ သီချင်းတွေက လွယ်လှချည်လားကွလို့ အထင်တော့ မသေးလိုက်နဲ့ဗျ ။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ဆိုချင်ဇောရယ်၊ ပွဲတော်အတွက် ပျော်နေတဲ့ စိတ်ရယ်နဲ့ပေါင်းပြီး ကာရံတွေကိုထပ်လိုက်တာ အချိန်တွေ နာရီတွေတောင်မေ့သွားတယ် ။ အကုန်လုံးအိပ်နေတဲ့ အချိန်ရောက်မှ သီချင်းရေးတာပြီးသွား ပါတယ်။ ပြီးတော့ စာသားတွေ ပြန်ကျက်၊ headphone တပ်ပြီး တီးလုံးနဲ့ flow နဲ့ အဆင်ပြေအောင် လေးငါးခေါက်လောက်ပြန်ဆိုကြည့်တယ်။ စိတ်ချရပြီ ဆိုမှ အိပ်ရာထဲဝင်ခဲ့တယ်..။ ဒီတုန်းက ကျွန်တော်အတွေးတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ ဂီတသမားတွေ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖန်တီးလို့ရတဲ့ ပီတိနဲ့ ဘာကွာလဲလို့ အခုကျွန်တော်သိချင်နေမိတယ်။ သြော်.. ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက နေ တောင်ဒီလောက်မှ မပူသေးတာကိုး..........။
မနက်ဖက် ကျောင်းရောက်တော့ ကျွန်တော်ကတောင် နောက်ကျနေပြီ။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရော ၊ organizer တွေရော တော်တော်စုံနေလို့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်ကို ကောင်းချီးဝိုင်းပေး ကြပါတယ်။
"ဟေ့ကောင် ဘယ် ဘိခ်ျ မှာသွားသေနေလို့ ဒီအချိန်မှ ရောက်တာလဲကွ"
ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောပဲ ပြုံးရုံသာ ပြုံးလိုက်တယ် ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ထပ်ပြောတယ်။
"ဟေ့ကောင် မင်းကိုပြုံးပြခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး.. ဘယ်လိုဖြစ်လို့နောက်ကျတာလဲလို့မေးနေတာ။
ဒီမှာငါတို့ လုပ်နေရတာ တော်တော် ပင်ပန်းနေပြီ။ "
"အေးလေ ပင်ပန်းရင်လည်း နားလိုက်ကြတော့ပေါ့ကွာ..။ အကုန်လုံးလည်း ပြီးနေပြီပဲ။
ငါညက သီချင်းရေးနေလို့ နောက်ကျ သွားတာပါကွာ"
"ဟာ... ဟုတ်လား ။ လုပ်စမ်းပါဦး... ငါတို့ကြည့်ရအောင်...။"
"နေပါဦး မင်းတို့ကလည်း ။ ငါဆိုရင်နားထောင်ရမှာပါ.. အေးဆေးပေါ့ ။"
"အေးပါ... အေးပါ.... ဒါနဲ့ အစားအသောက်ထုတ်တဲ့ တိုကင်ပြားတွေ မင်းပဲဝေပေးလိုက်တော့ကွာ ။ အဲ့ဒါမင်းလာရင် လုပ်ဖို့ဆိုပြီး ငါတို့ချန်ထားတာ..။"
ဒီကောင်တွေက ဒီလိုပဲ။ သူတို့ဘာသာ သူတို့လုပ်လိုက်လည်း ပြီးနေမယ့်ကိစ္စကို ကျွန်တော့်တာဝန်လေး ဘာလေးဆိုပြီး ကျန်တာတွေ လျှောက်ခိုင်းနေတာ ။ ကျွန်တော်လည်း ကဒ်ပြားတွေယူပြီး နာမည်၊ အတန်း ရေးခိုင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီကဒ်တွေကို ထုတ်ခိုင်းရပါတယ်။ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးတွေလည်း ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းကူကြတယ်။ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေက များတာကိုး ။ အောင်မယ်... ဒီအလုပ်ကလည်း မျက်နှာ ပွင့်တယ်ဗျ..။ ကဒ်ပြားပေးလို့မဟုတ်ပါဘူး..။ ကောင်လေးတွေက သူတို့သိချင်တဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ နာမည်ကိုလာစုံစမ်းကြလို့ပါ ။
"ဖားကြီး.. အဲ့ဒီကောင်မလေးကွာ နာမည်ရေးရင် မှတ်ထားလိုက်စမ်းပါ"
"ဟား... ငါ အလုပ်ရှုတ်နေတယ် သူငယ်ချင်းရေ.. နာမည်မှတ်ထားဖို့ဆိုတာ
"လုပ်ပါကွာ မင်းကလည်း... ငါလန်ဒန် တစ်ဘူးပေးပါ့မယ်"
"အေးလေ... ငါမှတ်မိရင်တော့ မှတ်ထားပြီး မင်းကိုပြောပါ့မယ်။ လန်ဒန်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော် မင်းနဲ့ငါ အတန်းတူနေလို့.."
ဒီလိုမျိုးက တစ်မျိုး..။ ကျွန်တော့်ထက် အတန်ငယ်သော ကောင်လေးတစ်ယောက်ကလည်း ကျောင်းသူအသစ် လေးနာမည်ကို သိချင်လို့ လာမေးပြန်တယ်..။ သူကကျတော့ နာမည်မေးရုံသာမက တစ်ခြားအကူအညီ ပါတောင်းလာပြန်တယ်။
"ကိုဖားကြီး ဒါလေးပါ ပေး ပေးပါလားဗျာ"
"အေး ပြောပြော ဘာပေး ပေးရမှာလဲ"
"ဟာ.. ဟေ့ကောင် ဟေ့ကောင် အဲ့ဒါတော့ မင်းဘာသာ မင်းပေးဟေ့ကောင်ရေ..
"လုပ်ပါဗျ အစ်ကိုရ.. အဆင်ပြေရင် အစ်ကိုတို့ သူငယ်ချင်းတွေကို တစ်ဝိုင်းဗျာ.."
"တော်တော် ဟေ့ကောင်... နာမည်မှတ်ထားရင် တော်ပြီပေါ့ကွာ.. ငါသေသေချာချာ မှတ်ထားပါ့မယ်
ဟုတ်ပြီလား... ကျန်တာတော့ မင်းဘာသာ မင်းပဲကြိုးစားပေါ့ကွာ"
"ဟင်း... ရပါတယ်ဗျာ..ရပါတယ်... ခင်ဗျားကလည်း ဒါလေးအကူအညီတောင်းတာကို... ကိုယ်ချင်း
"အေး မင်းထင်ချင်သလိုထင်ကွာ ... ငါဒီမှာ အလုပ်ရှုတ်နေတယ်မင်းတွေ့လား.. နာမည်သိချင်ရင် ခဏနေ
လူရှင်းရင်လာခဲ့... အခုတော့ မင်းသုတ်တော့.. အာရုံနောက်တယ်ကွာ"
ကောင်လေးတွေကလည်း ဒီလိုမျိုး အပူကပ်ကြတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော အဲ့ဒီနေ့က ကျွန်တော် လန်ဒန်တွေ၊ အအေးတွေ အပြင် အနောက်ဝိုင်းအတွက်ပါ ရိက္ခာတွေ ရသွားတယ်။ အနောက်ဝိုင်း ဆိုတာက ၀ပ်ရှော့ရဲ့ နောက်ဘက်မှာ ကြိတ်ပုန်း ကစ်ကြတဲ့ ၀ိုင်းလေးကို ပြောတာပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ လုံးဝမသိအောင် အရက်ကို ပျော့ပျော့စပ်ပြီး စပါကလင်တို့ လီမွန်နံ့တို့ရောလိုက်တယ်။ ပြီးရင်ဆရာတွေစားဖို့ချက်တဲ့ ဟင်းကျန်တွေနဲ့ မြည်းကြတဲ့ ၀ိုင်းလေးပေါ့။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်အောင်တော့ အလုပ်မခံဘူး။ အားလုံးကို နိုင်သလောက်သာ သောက်ခိုင်းပါတယ်။ မနိုင်လို့ ကွဲတော့လည်း ၀ပ်ရှော့နောက်ကတိုက်ပျက်လေးထဲ သွားသိပ်ထားလိုက်တယ်။ ခန်းမထဲတော့ လုံးဝ မ၀င်ခိုင်းတော့ပါဘူး။
ကဒ်ပြားတွေ ဝေတဲ့ ကိစ္စတွေပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း အနောက်ဝိုင်းကို သွားသတင်းပို့လိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့အနောက်ဝိုင်းဆိုတာကလည်း ကန့်လန့်ကာ နောက်က စီမံနေတာနဲ့ တူပါတယ်။ Oragnizer ယောကျာင်္းလေးတွေ အကုန်လုံးနဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်လောက်ဘူးထင်တဲ့ ကလေးတွေကို ခေါ်တိုက်နေတဲ့နေရာပေါ့..။ ကျွန်တော်ဝင်လာတာ မြင်တော့..
"ဟာ ဖားကြီး မင်းကဟိုမှာနေလေကွာ.. ပွဲစတော့မယ် မဟုတ်လား...။ announcer ကောင်မလေးတွေရော အဆင့် သင့်ဖြစ်ပြီလား"
"ဖြစ်ပါပြီကွာ.. သူတို့ဘာသာ သူတို့လုပ်တတ်ပါတယ်.."
"ဟာ.. မင်းကသိပ်မသောက်နဲ့ လေကွာ.. သီချင်းလည်းဆိုဦးမယ် မဟုတ်လား... ပြီးတော့ လိုရင်လည်း
တစ်ယောက်တစ်လှည့် စင်ပေါ်တက်ပြီး announcer ၀င်လုပ်ပေးဦးလေကွာ"
"အေးပါ.. ငါသိပါတယ်.. နည်းနည်းလေး ရဲဆေးတင်တာပါ"
ဒီလိုအကြောင်းပြလိုက်တော့ ဘာမှတော့ မပြောကြတော့။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်။ ဒီလို announcer လုပ်တယ်ဆိုတာ မျက်နှာလည်းပြောင်ရဲဦးမှ။ အတည်ကြီးလုပ်လို့မရသလို၊ မလိုအပ်သေးဘဲလည်း ဟာသ ပေါပေါတွေမပြောရ..။စင်အောက်ကလူတွေက ကိုယ့်ကို သွပ်ချောင်ချောင်လို့ထင်သွားနိုင်တယ်...။ ပြောရရင် ပေါရဲ၊ ပြောင်ရဲမှ ဖြစ်မယ့်ကိစ္စ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတော့ အစကတည်းက ပေါတောတော၊ ပြောင်တောင်တောင် (မျက်နှာ) နေရဲတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းမကြတယ်။
"ဟေ့ကောင်တွေ ငါသီချင်းဆိုရင် နည်းနည်းပွဲစည်အောင် မင်းတို့ပန်းတွေဘာတွေ တက်ပေးပါလားကွ"
ပန်းတွေ ဆိုတာက ဒီလိုပါ ..။ ကျွန်တော်တို့က သီတင်းကျွတ်ရင်လုပ်မယ့် ဆရာကန်တော့ပွဲအတွက် ရန်ပုံငွေ အနေနဲ့ နှင်းဆီပန်းတွေကို အနီရောင်ပါကင်အိတ်လေးတွေနဲ့ ထုတ်ပြီး တစ်ပွင့် ငါးရာ နဲ့ရောင်းပါတယ်။ ပေးချင်တဲ့သူက ၀ယ်ပြီးပေးပေါ့..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တွေက စီစဉ်သူတွေဆိုတော့ နှင်းဆီ သုံးလေးပွင့် လောက်တော့ ကျွန်တော့်အတွက် ချန်ထားဟု ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာပါ..။ သူတို့ကလည်း အတည်ပင်..
"အေးပါ... ဒါမှ မင်း ပိုမိုက်သွားတာပေါ့..။ လက်ခုပ်သံလည်း မပူနဲ့ဟေ့ကောင် ငါတို့ တီးတာနဲ့တင်
"မင်းတို့နားထောင်လိုက်ပါဦး.. ငါ့သီချင်းကို မင်းတို့တီးချင်စိတ်ကို ပေါက်လာမှာပါ..."
ကျွန်တော်ကလည်း အကြောမခံ ပြန်ပြောလိုက်တယ်..။
အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ခန်းမထဲဝင်ပြီး announcer ၀င်လုပ်လိုက် အနောက်ဝိုင်းကို သွားလိုက်နဲ့ အလုပ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်နေတော့တယ်..။ ရှေ့မှာ မအားရင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်... ဟေ့ကောင် ဖားကြီး ကလေးတွေပြီးရင် မင်းဆိုရမှာ နည်းနည်းကစ်ချင်ကစ်လိုက်ဆိုပြီး အရောင်မရှိတဲ့ စပါကလင်နဲ့ အရောင်မရှိတဲ့ ဘီအီး လေးတွေ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲ ထည့်ပြီး ပိုက်လေးတပ်လို့ လာလာပို့ပေး ရှာတယ်..။ ဒါကို မြင်ရတဲ့ ဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းသူလေးတွေကတော့ ဒီကောင်တွေဘာလဲဟ အအေးသောက် ပြီးတာနဲ့ မရမ်းပြားလေးစုပ်လိုက် ပြန်သောက်လိုက်နဲ့ ဆိုပြီး အံသြနေကြမှာ ကျိန်းသေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှတော့ စပ်စပ်စုစု မေးမနေကြပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သောက်ပြီး ပွဲပျက်ခဲ့တယ်လို့ အခုထိကို မရှိခဲ့တာပါ ။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ ဌာန သိက္ခာကျအောင်လည်း ဘယ်တော့ မှ မလုပ်ခဲ့ကြဘူးလေ..။
နည်းနည်းလေး ရီဝေလာတော့ ကျွန်တော်လည်း သီချင်းဆိုရမှာကို မေ့လာပြီး သူများတွေဆိုတာ အားပေးရင်း ပျော်လာပါတယ်။ နှင်းဆီပန်းတွေကလည်း ကောင်လေးတွေကသာမက၊ ကောင်မလေးတွေကပါ ၀ယ်ပြီး သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေသဘောကျတဲ့ သူတွေကို တက်ပေးကြတော့ အားလုံးပွဲကျနေကြတာပေါ့။ ရှေ့တန်းကို ရိက္ခာမလာ လို့ ကျွန်တော်လည်းနောက်တန်းကို လိုက်သွားပြီး ကစ်နေတုန်း ကျွန်တော့်နာမည်ကို မိုက်နဲ့ ကြေငြာတာ ကြားရပါတယ်။
"အခု ဆိုမယ့်သူကတော့ B.Tech second က ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း ဖားကြီး ဖြစ်ပါတယ်"
သိတဲ့ လူတွေရော မသိတဲ့သူတွေရော လက်ခုပ်တီးကြလို့ ထင်ပါတယ် အသံကျယ်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပွဲတွေက ဘယ်သူပဲ ဆိုဆိုလက်ခုပ်သံက မြိုင်ပြီးသား..။ အသံမကောင်းလည်း ကိစ္စမရှိ နာမည် ကြီးတဲ့ သီချင်းဆို အားလုံး ကလိုက်ဆိုကြတော့ ကိုယ့်အသံတောင် မြုပ်မြုပ်သွားတတ်တယ်။ ကျွန်တော့်အလှည့် ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နာမည်ကြားကတည်းက ငါ့ကိုတော့ ခေါ်နေပြီဟဆိုပြီး ထွက်လာတော့ ချက်ချင်းဆိုသလို စင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဆိုမယ့်တီးလုံးစီဒီ ခွေကိုပေး၊ မိုက်ကရိုဖုန်းကို ကိုင်ပြီး ဟန်ပါပါနဲ့ ဆိုပါတော့တယ်..။ ပြောရဦးမယ်အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့က အပေါ်အဖြူ၊ အောက်က အပြာပုဆိုးကို ၀တ်နေရပြီဗျ..။ အဲ့ဒီတော့ fresher welcome လည်း uniform ပဲဝတ်ရမယ်ဆိုတော့ ဟစ်ဟော့သီချင်းကို ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်က ပုဆိုးအပြာ ကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ စဉ်းစား သာကြည့်ပေတော့ ကျွန်တော့်စတိုင်ကို..။ ဒါပေမယ့် ဆင်တူတာတော့ ရှိတယ်ဗျ ။ တစ်ချို့ rapper တွေ သီချင်းဆိုရင် ဘောင်းဘီခွလေး ကိုင်ကိုင်ပြီးဆိုသလို ကျွန်တော်လည်း ပုဆိုးစလေး ကိုင်ကိုင်ဆိုတော့တာပေါ့..။ သီချင်းကတော့ fresher လေးတွေရောက်လာတာကို အပြောင်အပြက် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းပါ..။ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း အကူအညီလိုရင် ပြော၊ ယောကျာင်္းလေးတွေကိုလည်း ဒီကျောင်းမှာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေပြောပြတဲ့ သီချင်း..။
ဆိုနေရင်းနဲ့ ဟိုကောင် တွေကို သတိထားမိတော့ စင်ပေါ်ကို တစ်ယောက်တက်လာပြီး ပန်းတစ်ပွင့်လာပေး သွားပါတယ်။ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ကိုယ်စားပေးခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့..။:)
ပန်းမှ တစ်ကယ့်ကို ပန်းကြီးပါ ။ နှင်းဆီပွင့် မဟုတ်ပဲ ဂန္ဓာမာ ပန်းကြီးဖြစ်နေတာပဲ နည်းနည်းထူးဆန်းတာ ။ ဒီကောင်တွေဘယ်က ရလာတာလဲဟ ။ ပန်းကတော့ နည်းနည်းနွမ်းနေပြီလို့ သီချင်းဆိုရင်း မသိစိတ်က မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်လာပြီး အဲ့ဒီပန်းမျိုးတွေပဲ တက်ပေးပါတယ်။ အောင်မယ်.. ကိုင်ပုံကလဲ ကဗျာဆန်ဆန်လေး ပန်းပွင့်ရဲ့အောက်ခြေ အရိုးထိပ်ကနေ ကိုင်ပြီးတော့ကိုပေးတာ..။ အတန်းထဲက သူငယ်ချင်းကောင်မလေး တွေကိုလည်း စင်ပေါ်တက်ပြီး ပေးခိုင်းပါတယ်။လေးခေါက် ငါးခေါက် လောက်ပေးပြီးတော့ ဂန္ဓမာပန်းတွေတင် မဟုတ် တော့ပဲ စိန်ခြယ်တွေပါ ပါလာတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်စင်ပေါ် တက်ပေးနေတာ ဆိုတော့ အကုန်ယူလိုက်ပါတယ်။ စင်အောက်က ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကလည်း ကျွန်တော့် သီချင်းကို သဘောကျပြီး လက်ခုပ်တီးလိုက်ရယ်လိုက် ဖြစ်နေကြတာကိုး။ ပန်းတွေလာပေးရင်သာ ကိုင်ရတာစိုစီစိုစီ ဖြစ်နေတာ..။ သီချင်းကိုပဲ ကြိုက်တာလား... ဂန္ဓမာ တွေ စိန်ခြယ်တွေနဲ့ ပုဆိုးကြီးဝတ်ပြီး ဟစ်ဟော့မြူးမြူးဆိုနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုပဲ ရယ်ချင်ကြတာလားမသိဘူး.. ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ အတွက်ပွဲကတော့ တော်တော်စည်သွားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အများစုက ကောင်လေး၊ကောင်မလေးတွေ ကြွေအောင် အချစ် သီချင်းအေးအေလေးလေး တွေ ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က ပေါက်တီးပေါက်ချာ ပြောင်စပ်စပ်ဆိုပြလိုက်လို့လဲ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
သီချင်းဆိုပြီးလို့ စင်ပေါ်က ဆင်းတာနဲ့ ဟိုကောင်တွေကို သွားမေးပါတော့တယ်..။
"ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ပန်းတွေက ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးကွ ... နှင်းဆီပန်းတွေက
"နှင်းဆီပန်းတွေက မင်းရှေ့က ဆိုသွားတဲ့ သူတွေကို ပေးဖို့ဝယ်သွားတာ ကုန်သွားတယ်လေ"
"အေး ... အဲ့ဒါနဲ့ ဒီပန်းတွေက ဘယ်ကရလာတာလဲ.."
"ငါတို့လည်း မင်းကပွဲစည်မှ ကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြံလိုက်တာပေါ့"
"အင်း... လုပ်ပါဦး မင်းတို့အကြံကို"
"မအင်နဲ့ ငါတို့မှာ ဌာနမှူး ရုံးခန်းထဲက ဘုရားပန်းအိုးတွေရော.. ကျောင်းခန်းတွေထဲက
ဘုရားပန်းအိုးတွေထဲကရော အလတ်ဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ ပန်းတွေစွန့်လာရတာကွ"
"အေး .. အဲ့ဒါကြောင့် ကိုင်လိုက်ရင် စိုစိစိဖြစ်နေတာ"
"ဟဲ.. ဟဲ ညှီလဲညှီနေပြီ"
ကျွန်တော်လက်ကို နမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဟုတ်ပါရဲ့ ကျွန်တော့်လက်လည်း တော်တော်ကိုညှီနေပြီ။
"သြော် ဒါကြောင့်မင်းတို့က ပန်းပွင့်အခြေကနေ ကိုင်ကိုင်ပေးကြတာပေါ့"
"အေးလေ... ဟဲ.. ဟဲ..ဟဲ.. ဟား ဟား ဟား"
ကျွန်တော်လည်း ဒီကောင်တွေပေါက်ကရာလုပ်တာကို စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် တော်တော်ပျော်သွားပါတယ်။ တတ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ကောင်တွေ..။ ဒါတောင် သူတို့က ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်..။
"သပြေပန်းတွေ ရှိသေးတယ်ကွ.. မင်းသီချင်းပြီးတာ စောသွားလို့ နို့မို့အဲ့ဒါတွေပါ ထပ်ပေးတယ်"
"အေး.. ကောင်းတယ်ကွာ.. အဲ့လိုသာ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့.. ဆရာမတွေအဆောင်က နတ်အုန်း ဗောင်းတော်ပါ
စွန့်ပြီး ငါ့ကိုချည်ပေးလိုက်ကြ.. ငါလည်း ဟစ်ဟော့ beat နဲ့ တစ်ခါတည်း နတ်ကနားပါပေးလိုက်မယ်.."
"အေးကွာ... အဲ့ဒီ့အကြံကို ငါတို့မေ့သွားတယ်.. မင်းရုပ်ကလည်း နတ်ကတော်မာမီတွေနဲ့ တူတော့ တော်တော်
"ခွေးကောင်တွေ... မင်းတို့လုပ်လိုက်ရင်တော့ ပေါက်ကရာတွေချည်းပဲ.. ဟား...ဟား..."
အဲ့ဒီနေ့က ရယ်သံတွေခန်းမထဲမှာ ပြည်လျှံပြီး fresher welcome ပွဲ အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်က ပန်းတွေရဲ့ ညှီနံ့ကတော့ ညနေထိတောင် မပျောက်သေး..။ ဘုရားပန်းအိုးက ပန်းတွေကို မြင်တိုင်း ကျွန်တော့်လက်က ပန်းညှီနံ့တွေကို သတိရမိနေတယ်။ ညှီတော့ညှီတယ် ဒါပေမယ့် ဘုရားပန်းအိုးက စွန့်လိုက်လို့လား မသိဘူး .... သန့်စင်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုတော့ အရာရာ ဟာ အတိတ်မှာ စနစ်တကျပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်..။ ညှီနံ့အသစ်တွေရှိမှန်းလည်း ကျွန်တော်သိလာခဲ့တယ်..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တွေ ပေးခဲ့တဲ့ ပန်းပွင့်က ညှီနံ့တွေလောက် တော့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းမူ့ လုံးဝမရှိတော့။
သြော်...ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက နေ ကလည်းဒီလောက်မပူသေးတာကိုး..။
ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီး 14 ယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
အကြောင်းအရာတူ...... ရသတို ပြခန်း, ရောက်တတ်ရောက်ရာ ဒိုင်ယာရီ
Cyclone shelter နှင့် နားထောင်ခဲ့သော စာတမ်းဖတ်ပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာ အသင်းရဲ့ နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီပွဲ နဲ့ စာတမ်းများဖတ်ပွဲကို ၈ ရက်နေ့နဲ့
၉ရက်နေ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉ မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အားအားယားယားဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်မောင်ဖားကြီးလည်း အခြေအနေ အခွင့်အရေး ရှိနေတုန်းအချိန်မို့ စာတမ်းတော်တော်များများကို သွားရောက်နားထောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စာတမ်းတော်တော်များများကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ မှာ အထူးခြားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တာရာယ် တွေအကြောင်းကို တင်ပြဖတ်ကြားသွားခဲ့ကြတာပါ။ ဒီစာတမ်းဖတ်ပွဲမှာ ကျွန်တော်ပိုမိုသိလာတဲ့ အကြောင်းကတော့ Cyclone Shelter လို့ ခေါ်တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကျရင် လူတွေခေတ္တသွားရောက် နေနိုင်တဲ့ စခန်းရိပ်သာတွေအကြောင်းပါ..။ သိပြီးတဲ့သူတွေလည်း သိပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်လိုပဲ သိပ်မသိသေးတဲ့ တစ်ယောက်တစ်လေများရှိမလားဆိုပြီး ၀င်လျှာရှည်တယ်လို့ပဲ သဘောထားကြပါကုန်....။
Cyclone Shelter နဲ့ပတ်သတ်လို့ အဓိကဟောပြောသွားသူကတော့ YTU က ဒေါက်တာဥာဏ်မြင့်ကျော်ပါ ...။ သူက Design Concept of Cyclone Shelter ဆိုတဲ့ စာတမ်းကိုတင်သွင်းဖတ်ကြားသွားပါတယ်...။ အများသိတဲ့ အတိုင်းပဲမနှစ်က နာဂစ်မုန်တိုင်း ၀င်မွှေတော့ သေဆုံးတဲ့သူတွေက အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်အရ ၁၄၀ ၀၀၀ ကျော်ပါတယ်။ဒီလိုသောက်သောက်လဲ သေကြပြီဆိုတော့ သင်ခန်းစာတွေလည်း ရသင့်သလောက် ရလာကြာပြီပေါ့။ ဒီတော့ နောက် တစ်ခါဖြစ်ရင် လူတွေဒီလိုမျိုး အဓိပ္ပါယ်မဲ့ မသေရအောင် ဘာတွေပြင်ဆင် သင့်လည်းဆိုပြီး ၀ိုင်းစဉ်းစားလာပါတယ်...။ ဒီနေရာမှာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ သေရတယ်ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို ကျွန်တော် သုံးလိုက်ရတာက အကြောင်းရှိပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ပြီးတော့ အဓိကသေရတဲ့အကြောင်းက မုန်တိုင်းဒီရေတိုးလာလို့ သေရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပါတယ်။ မိုး/ဇလ ကဦးထွန်းလွင်ကလည်း MES ဥက္ကဌ ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ ပထမနေ့က သူ့စာတမ်းကို လာဖတ်သွားတော့ ဒီလိုပြောသွားပါတယ်..။ သူတို့အနေနဲ့ ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တာကို သိပါတယ်တဲ့.... ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတာတဲ့...။ Early Warning အားနည်း တာကြောင့်လို့လည်း သူကဆက်လက်ဝန်ခံသွားပါတယ်...။ ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အထိအကျိုးသက်ရောက်မူ့ရှိသလဲ ဆိုတာတော့ပြောကြားသွားခြင်းမရှိခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်..။
ပြီးတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရဲ့ သဘောသဘာဝကိုလည်း ဦးထွန်းလွင်က ဆက်လက်ရှင်းလင်းပြပါတယ်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာက ပင်လယ်ထွက်ပေါက်မြစ်တွေက များတော့ မုန်တိုင်းဒီရေ ဟာမြစ်ကြောင်းတွေက တဆင့်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဆောင့်ဝင်လာပြီးတော့ ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ မိုင်နှစ်ဆယ်၊သုံးဆယ် အကွာလောက်လည်း ရောက်ရော ကုန်းတွင်းရေတိမ်နဲ့တွေ့ပြီး အရမ်းမြင့်တဲ့လှိုင်းတွေအဖြစ်နဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို တိုးဝင်ပါတော့ တယ် .. ။ ဒီမှာတင် ရေတက်ချက်ကပေ ၂၀ လောက်ရှိလာပြီး လူတွေသောက်သောက်လဲ သေကြပါတော့တယ်..။ တဖြည်းဖြည်းတက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး..။ အချိန်တိုအတွင်းမှာတင် တိုးပြီးတက်လာတာပါ..။ အရင်တုန်းက လည်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ဒီထက်မကတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေ အသေအပျောက်ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ခုလိုသတင်းနဲ့နည်းပညာ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖြစ်သွားတာကြောင့်ရင်ထုမနာ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ တယ်လီဖုန်းတွေ၊ အင်တာနက်တွေ နဲ့အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတာလည်း နောင်ဆိုမဖြစ်သင့်ကြောင်း မိုး/ဇလ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဒေါက်တာထွန်းလွင် ကပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Cyclone Shelter အကြောင်းပြန်ဆက်ပါမယ်။ မုန်တိုင်းတွေကျရောက်ရင် လူတွေအရေးပေါ် သွားရောက်နေထိုင် ရမယ့် နေရာတွေပါ ။ သာမန်အချိန်မှာ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ရုံးတွေအဖြစ်အသုံးပြုပြီး၊မုန်တိုင်းကာလ မှာ လူတွေခိုနားတဲ့ နေရာအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အဆောက်အဦးအမြင့်ကြီးတွေပေါ့..။ လူတစ်ရာအတွက် ငါးရာအတွက်၊ ဆိုပြီး အသီးသီး ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂါလားဒေ့ရှ် ကတော့ လူငါးသိန်းလောက် သေခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းကြီးခံခဲ့ဖူးတော့ နိုင်ငံအ၀န်းမှာ Cyclone Shelter ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် ၅၀၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ ကနဦးအနေနဲ့ အစိုးရက ၁၈ လုံးဆောက်ဖို့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
အခု ဇန်န၀ါရီလ အလယ်ရောက်နေပါပြီ...။ ဦးထွန်းလွင်ကတော့ ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့ကနေ မေ ၁၅ ရက်ထိကို မိုးလေ၀သ သတင်းကို ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါလို့ အဲ့ဒီနေ့ကပဲ ပြောကြားသွားပါတယ်...။ နောက်မဖြစ်နိုင် ဘူးလို့ ဘယ်သူမှအာမခံမပြောနိုင်ပါဘူးတဲ့...။ သြော်... Cyclone Shelter တွေက အခုမှ စလုံး ရေစ နေတုန်း...။
Cyclone Shelter မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် အစားအစာ၊ရေ၊ ဆေးဝါး တွေပြည့်စုံရပါမယ်။ လူအများကြီးက ခိုနားကြမှာဆိုတော့ ရေအိမ်စနစ်၊ လေ၀င်လေထွက် စနစ်တွေကလည်း ကောင်းမွန် လုံလောက်ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ လူတစ်ရာ၊ လူငါးရာ အတွက်ဆိုတဲ့ ဒီဇိုင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အထက်လူကြီး တွေနဲ့ ဆရာနဲ့ ငြင်းနေရတုန်းဆိုတာကိုလည်း ရှင်းပြသွားပါတယ်။ လူကြီးတစ်ချို့က လူငါးရာ ဆိုရင် သာမာန်အခြေအနေမှာ ကျောင်းသားငါးရာ ဆန့်ကျောင်းဆောင်တို့ဘာတို့ တွေးနေပေမယ့် ဆရာတို့ ဆိုလိုတာက အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ပါ ။ အရေးပေါ်အခြေ အနေမှာလည်း လူငါးရာ ဆိုပေမယ့် ပြည့်သွားပြီ ဆိုပြီး နှင်လွှတ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကိုပဲ တစ်ချို့တွေက Maximum ၅၀၀ ဆိုတာနဲ့ သာမာန်အခြေအနေ လူငါးရာ ဆန့်အဆောင်ကြီးလို့တွေးတတ်ကြတယ်လို့ ဆရာက ပြောကြား သွားပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအယူအဆနဲ့ ပတ်သတ်ရင် အဓိကကျဆုံးအချက်က ကြိုတင်သတိပေးစနစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ Cyclone Shelter တစ်ခုဟာ ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ကြိုတင်သတိပေးစနစ်ရှိနေရပြီး လူထုကလည်း ဒီစနစ်နဲ့အကျွမ်းတ၀င်ရှိနေရပါမယ်။ ဒီအတွက်လည်း နားလည်အောင်လို့ လူထုကို ပညာပေးသင့်တယ်လို့ စာတမ်းရှင်တွေနဲ့ လာရောက်နားထောင်သူများ အားလုံးက မှတ်ချက်ချကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်... တကယ်လို့ ဒီစနစ်တွေ၊ ဒီအကြောင်းတွေဟာ လူထုဆီကိုသေသေချာချာ မရောက်ခဲ့ရင် ဒီစာတမ်းတွေဟာ စာတမ်းတွေအဖြစ်နဲ့ပဲ စည်းဝေးခန်းမထဲမှာ ကျန်နေတော့မှာကိုး။ ဒီတော့ လူထုကို ပညာပေးရေး ဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာတွေကို ပညာပေးရမလဲဆိုတာကတော့ တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများပဲ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လူထုပညာပေးရေး နဲ့ပတ်သတ်ပြီး YTU ဘူမိဗေဒဌာနက ဦးကျော်ထွန်းကလည်း သူ့စာတမ်းမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ သီရိလကာင်္က ကလေးတစ်ယောက်ဟာပင်လယ်ရေ ရုတ်တရက်ကျသွားတာကို သတိထားမိတဲ့အတွက် သူ့မိသားစုကိုခေါ်ပြေးတာ သေဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မြေကြီးထဲက ရေတွေစိမ့်ထွက်နေတာကို သတိမထားပဲနေကြတော့ Landslide ဖြစ်ပြီး ရွာလုံးကျွတ်တွေ မြေပြို ပျောက်ကွယ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါမျိုး သတင်းတွေက ခေတ်အခြေအနေရဲ့ပေါ်လစီကြောင့်ပဲလားမသိဘူး သတင်းစာတွေဘာတွေထဲမှာ အရေးတယူဖေါ်ပြခြင်းမရှိခဲ့ ဘူးလို့ ဆရာကသူ့ရဲ့ Landslide Hazards Mitigation Measures in Myanmar စာတမ်းမှာ စကားဦးအဖြစ် ပြောကြားသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာက ဒီလိုမျိုး လူထုပညာပေးရေးအစီအစဉ်တွေ တော်တော်အားနည်း နေတယ်ထင်ပါတယ်။
ဆရာ ဥာဏ်မြင့်ကျော် တို့ကတော့ တွက်သင့်တာတွေကို တွက်ချက်ပြီး နောက်ထပ်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးမဖြစ်အောင်
Cyclone Shelter တွေကို ဒီဇိုင်းလုပ်နေပါပြီ။ ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတွေလည်း လုပ်ပြီး MES ကနေ Cyclone Shelter တွေကိုအတည်ပြုလက်ခံပေးနေပါတယ်။ ဆရာပြောသလိုပဲ အဆောက်အဦးတွေက တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်ဆို ယိုယွင်းသွားတဲ့ ကိစ္စကိုလည်း တာဝန်ရှိသူတွေက စီစစ်သင့်ပါတယ်။ ကန်ထရိုက်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကပဲ ခိုတာလား၊ နောက်ပိုင်းထိန်းသိမ်းမူ့ပဲ ညံ့သလားဆိုတာတော့ လုပ်နေတဲ့သူတွေ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ စာတမ်းတွေကို ပညာရှင်တွေ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာပဲ ငြင်းခုံဆွေးနွေးနေစရာ တစ်ခုမဖြစ်စေချင်ပါဘူး ။ အဲ့ဒါကြောင့် ခင်ဗျားမှာ မြန်မာပြည်က ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေရှိရင် တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့် ပြောလိုက်ပါ။ Cyclone Shelter ကတော့ ၁၈ လုံးဆောက်ဆောက်နေပြီလို့ လိုတာကတော့ ၄၀၀၀ ကျော် လောက်ရှိမယ်။ ဦးထွန်းလွင်ကလည်း ဧပြီ ၁၅ ကနေ မေ ၁၅ အတွင်းနဲ့ ပြီးတော့ အောက်တိုဘာ လဆန်းကနေ နိုဝင်ဘာလဆန်းကိုတော့ သတိထားပါလို့ပြောသွားလေတယ်။ ဒီတော့ Cyclone Shelter တွေ
မပြီးသေးရင်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်အောင် လုပ်ထားဖို့လိုမယ် ထင်တယ်..။ သြော်နောက်ပြီး
နောက်နှစ်ဆယ်လောက်ရောက်ရင် မြန်မာပြည်ဟာ ငလျင်ဒါဏ်ခံရနိုင်ကြောင်းလည်း သူကပြောသွားလေရဲ့..။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူ့တွေ လုပ်ထားသင့်မသင့်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားကြပါတော့ဗျာ...။
ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီး 12 ယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
အကြောင်းအရာတူ...... မြင်သမျှ၊ကြားသမျှ, ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းတွေ
အာဟာရ ပြတ်နေတဲ့ လူငယ်
အာဟာရ ပြတ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိပါတယ်။ သူအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်တိုင်း သူဟာ မောပန်း နွမ်းနယ်လာပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းလာရသလိုခံစားမိတယ် ။ သူ့ရင်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာ စိတ်ပျက်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်လျှံနေပါတယ် ။ အမျိုးအမည်မရှိတဲ့ နာဖျားခြင်းတွေကသူ့တစ်ကိုယ်လုံး ကိုလွှမ်းခြုံထားတယ်လို့ သူခံစားမိတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေက အနီရောင်ပေါက်နေပြီလား...။ ဒါဆို သူသိပ်ပင်ပန်း
လွန်းလို့ပေါ့...။ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ အာဟာရငတ်မွတ်နေတာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ။ လမ်းမတွေဟာ တကယ်တော့ ရှည်လျားလွန်းလှပါတယ်။ လောကကြီးအကြောင်း နားမလည်ပဲ မသိခြင်း အမှောင်တိုက်ကို တိုးဝင်ခဲ့တာလည်း တကယ်တော့ နှစ်တွေကြာလှပြီပဲ...။
ညရောက်ပြီလား....။ အာဟာရ ပြတ်နေတဲ့ လူငယ်ဟာညကိုလည်း မုန်းတီးနေတယ်..။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူ
တွေက ၀ယ်ယူသွားတဲ့ညကို လူငယ်ဟာ မနာလိုဖြစ်မိတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ညဟာ နီယွန်နဲ့ မာကျူရီ
မီးရောင်တွေ အောက်မှာယိမ်းထိုးလှပခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါဏ်ရာတွေကို ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ညဟာနေရောင် ကိုဝါးမြိုပစ်လိုက်တယ်လို့ သူခံစားမိလာတယ်...။ တကယ်တော့ နေရောင်ဟာ ညဆီကို စနစ်တကျ ပျော်ဝင်သွားတာပါ။ သူအိမ်ပြန်ချိန်ဆို မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ အရာတွေက ၀င်သွားတဲ့ နေမင်းနဲ့အတူ ပါသွားလို့လေ ။ မနက်ဖြန်ဆိုရင် နေထွက်မှာပါလို့ ဆိုကြပေမယ့် သူ့အတွက်တော့ ဒီတစ်ညကုန်ဆုံးသွားတဲ့ နောက်တစ်မနက်ဟာလည်း အသက်တစ်ရက် ပိုကြီးသွားတာက လွဲလို့ဘာမှ မထူးခြားလာခဲ့ပါဘူး...။
အာဟာရပြတ်နေတဲ့ လူငယ်ဟာ လူတွေပြောနေကြတဲ့ ဗီတာမင်တွေ ငတ်မွတ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ စိတ်အဟာရတွေ ငတ်မွတ်နေရှာတာပါ။ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူလည်း အထင်ကြီးနေလေရဲ့...။ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အမေ့ရဲ့ဒုက္ခအိုးလေးဟာသူ့အကြောင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်လွန်းလှချည်ရဲ့လို့လည်း သူတစ်ခါတစ်လေ တွေးမိတယ်။ ယုံကြည်ရာ ဆိုတာ ဈေးကွက်တင်ရောင်းလို့ မရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်မှန်းတော့ သူယုံကြည်ထားတယ်။ သူ့မှာ ဦးထုတ်အနက်ရောင်တစ်လုံးလည်းရှိတယ်။ ဦးထုတ် အနက်ရောင်ဟာ နေရောင်ခြည်ကသာမကဘူး လူတွေရဲ့ အပြုံးတွေကပါ ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သူယုံကြည်ထားတယ် ။ ဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးပြတဲ့ မျက်နှာ တွေကို ပြန်ပြုံးပြ ရမှာထက် ဦးထုတ်အနက်ရောင် တစ်လုံးကို ခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်းထားပြီး မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ရတာက သူ့အတွက် ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့လည်း သူ........ ဒီနေ့အထိ ယုံကြည်ထားတုန်းပဲ။
သင်မြင်တတ်မည့် ဆိုပါက အာဟာရပြတ်နေတဲ့ လူငယ်ရဲ့ ကျောပိုးအိတ်အနက်ရောင်ထဲမှာ အောက်ပါတို့ကို မြင်နိုင်ပါတယ် ။
၁ ။ စိတ်ပျက်ခြင်း
၂ ။ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း
၃ ။ စိတ်အားငယ်ခြင်း
၄ ။ စိတ်ဓါတ်မခိုင်မာခြင်း
၅ ။ စိတ်ညစ်ခြင်း
၆ ။ စိတ်.............
၇ ။ စိတ် .........
အာဟာရပြတ်နေတဲ့ လူငယ်ရဲ့ စိတ်တွေဟာ အခုလောလောဆယ်တော့ သုံးမရအောင် ပျက်စီးနေတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်တိုင်ကြောင့်လား ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လား ဆိုတာ ဘယ်သူပြောနိုင်ပါသလဲ။ လူတစ်ယောက် ပျက်စီးခြင်း ဆိုးခြင်း၊ကောင်းခြင်းတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လား ဗီဇကြောင့်လားဆိုပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များ ငြင်းလို့ကောင်းနေဆဲပါ ။ အာဟာရပြတ်နေတဲ့ လူငယ်ကတော့ သူတို့ငြင်းလို့ ကောင်းနေဆဲမှာပဲ စနစ်တကျကို ယိုယွင်းနေပါတယ်။
သင်မမြင်တတ်ဘူး ဆိုပါကလည်း ကျောပိုးအိတ်အနက်ရောင်ထဲမှာ အောက်ပါပစ္စည်းတို့ကို မြင်နိုင်ပါတယ် ။
၁ ။ အသုံးမ၀င်တော့တဲ့ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တစ်အုပ်
၂ ။ တွန့်ကြေနေတဲ့ ပီကေဗူးခွံတစ်ခု
၃ ။ မင်ကုန်နေပေမယ့် မလွှတ်ပစ်ရသေးတဲ့ တစ်ခါသုံးဘောလ်ပင်
၄ ။ လူဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံကဒ်ပြားတစ်ခု
၅ ။ မကြည့်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တစ်စောင်
၆ ။ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အပေါစားမာနများ
၇ ။ .............................................
အဟာရပြတ် နေတဲ့လူငယ်မှာ ပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ ဘာမှမရှိဘူး ။ သူဟာ မွေးလာကတည်းက သူ့အသက် ကိုတောင် မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူး ။ တကယ်တော့ ဒီလိုရှုတ်ထွေးတဲ့ မြို့ပြမှာနေထိုင်တဲ့ သူ့အတွက် သေဆုံးလိုက်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကလည်း အများသား မဟုတ်လား ။ သူ့အသက်ကိုမှ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့စိတ်တွေကိုတောင် ဇီဝိန်ခြွေဖို့ ဖြစ်လာပြီကိုး။ ဒီတော့ သူဟာ အာဟာရပြတ်ပြီး သေဆုံးလိုက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်လာပါတော့တယ်...။ အာဟာရပြတ် နေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကို သင်တွေ့ခဲ့ရင် သူအလိုချင်ဆုံး သို့မဟုတ် အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒဟာ ဘာလဲလို့ မေးကြည့်လိုက်ပါ ။ သူလိုချင်တာဟာ ဘာလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမိပါရဲ့ ...။ မာကျူရီမီးတွေ လင်းပြီး ရီဝေကခုန်နေတဲ့ ညမဟုတ်ဘူးလို့တော့ ကျိန်ပြောရဲပါတယ်.......။
သူဟာ တကယ်တော့ စိတ်အာဟာရတွေကိုပဲ ငတ်မွတ်နေတာပါ....။
ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီး 8 ယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်
မော်ဒန် ရီနေဆွန်းလူသား မောင်ဖားကြီး
ရောင်စုံမီးရောင်များ ဖြိုးဖြိုးဖျက်ဖျက် အောက်တွင် ပွဲတော်က စည်ကားသိုက်မြိုက်ကာ ဆူညံလွန်းလှသည်။ ပွဲတော် ကျင်းပရာစင်မြင့်ထက်တွင်တော့ turntable ခေါ် Dj စက်များနှင့် ကျွန်တော် အလုပ်ရှုတ်နေသည်။ ကျွန်တော်သည် ပရိတ်သတ်များကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ နေရာကတော့ ကမ္ဘာ့ခေတ်ပေါ် ယဉ်ကျေးမူ့များ အများဆုံးစတင်ပေါ်ပေါက်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။ ပရိတ်သတ်များက ကျွန်တော် ဖန်တီးသမျှ ဂီတများကို အလွန်အကျွံပင်နှစ်ခြိုက်ကာ ခုန်ပေါက်ရူးမူးနေကြသည်။ကျွန်တော်က မိုက်ကရိုဖုန်းမှ တဆင့် ပရိတ်သတ်ကို တိုင်ပေးလိုက်သည်။
"People....... If you like this music star, say Dj Phar"
"Dj Phar... Dj Phar"
လူလေးသောင်းလောက်ရှိသော အသံများက ဂီတပွဲအတွင်း ဆူညံသွားသည်။ ဘုန်းကြီးရူးနှင့် လှေလူး တွေ့တယ်ပဲပြောပြော ပရိတ်သတ်နှင့် ကျွန်တော်မှာ အလွန်ပင် သဟဇာတ ဖြစ်နေလေသည်။ ကျွန်တော် ကလည်း ကြုံတုန်းကြုံခိုက် မြန်မာ့ဂီတကို ကမ္ဘာကို ပြချင်သော သဘောဖြင့် Dj သားစိုး မေ့ကျန်ခဲ့သော တွံတေးသိန်းတန် သီချင်းများ၊ တွံတေးစိုးအောင် သီချင်းများ သာမက ယိုးဒယား ပတ်ပျိုးများကိုပါ Dj remix လုပ်ပြလိုက်လေရာ ပရိတ်သတ်များမှာ အကြိုက်တွေ့မဆုံးဖြစ်အောင်ပင် Dj Phar...Dj Phar ဟု ကျွန်တော့်နာမည်ကိုဟစ်အော်ကာ ကခုန်နေကြလေသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့်အဖွဲ့မှ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက် စင်ပေါ်သို့တက်လာကာ ကျွန်တော့်ကို အရေးတကြီးလာပြောလေသည်။
"ဆရာ... နယူးယောက်က ဖုန်းလာတယ်။ မနက်ဖြန် ဆရာ အရေးတကြီး ခရီးထွက်စရာရှိတယ်... ဖြစ်နိုင်ရင် ဂီတပွဲကို စောစောသိမ်းလိုက်ပါတဲ့.....။ "
( ကျွန်တော့် ၀န်ထမ်းသည် အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် နိုင်ငံတကာ သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပင် ပြောနေကြသော်လည်း စာဖတ်သူများ မျက်စိမနှောက်စေခြင်းငှာ မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ တင်ပြပါမည်..ရှေ့ဆက်၍လည်း တိုင်းတစ်ပါးသားများနှင့် ပြောသောစကားမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ပြောသည်ဟု မှတ်ယူပါလေကုန်... ဒန်တန့်တန် ......။ ဤကား...စကားချပ်)
သူလာပြောသော စကားကြောင့် ကျွန်တော်သည် ချက်ခြင်းသဘောပေါက်သွားသည်။ ဒါဆိုရင် ဟိုအဖိုးကြီး ဘန်ကီမွန်းပဲဖြစ်ရမည်။ ဘယ်ဒေသကို ကျွန်တော့်ကိုလွှတ်ဦးမည် မသိသေး။ ထို့ကြောင့် ပရိတ်သတ်ကို...
"ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်ဖျော်ဖြေနေတာ အခုဆိုရင် တော်တော်များနေပါပြီ... ဒီတော့ ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ် လုပ်ပြမယ် အကုန်လုံး လိုက်ကကြမယ်မဟုတ်လား"
အသံများ အစုံထွက်လာသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်က စေ့နေပြီဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါတစ်လေတွင် ကျွန်တော်သည်ပရိတ်သတ်က ပွဲတောင်းလွန်းသောကြောင့် နာရီဝက်၊ တစ်နာရီမျှ ပိုမိုအချိန်ယူကာ ဖျော်ဖြေရသည်။ သို့သော် ဒီနေ့ပွဲကတော့ မနက်ဖြန် ခရီးထွက်စရာ ရှိသည် စောစောနားပါ ဟုတောင်းပန် လာသောကြောင့် ရပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနှင့် စိန်ခြူးကြာညောင် သီချင်းအား remix လုပ်ထားသည့် သီချင်းနှင့် ဖြေဖျော်ကာ ရုပ်သိမ်းလိုက်လေသည်။
ပွဲပြီးသည်နှင့် ကားနှင့်ပြန်ရန် စိတ်ကူးထားသော်လည်း စောစောနားချင်သောကြောင့် ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် ရဟတ်ယာဉ်ကိုသာလှမ်းခေါ်ကာ အိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရဟတ်ယာဉ်စီးရသည်မှာ ဇိမ်မကျလှသော်လည်း လိုရာခရီးတော့ မြန်မြန်ရောက်သည်။သို့သော် လောင်စာဆီရှားပါးလာသောကြောင့် ဒီရဟတ်ယာဉ်ကိုလည်း CNG ပြောင်းရဦးမည်။ ကိုယ်က မီလျံနာဆိုပေမယ့်အလကား ထိုင်ဖြုန်းနေ၍ မဖြစ်...။ ဒီတစ်ခေါက် မြန်မာပြည်ပြန်ဖြစ်ရင်တော့ ကျွန်တော်ပိုင်သမျှ ရဟတ်ယာဉ်တွေ CNGပြောင်းပစ် ရမည်ဟု စိတ်ကူးမိသည်။ ကြက်ဆူတွေ Bio ဒီဇယ်ထွက်ရင်တော့ ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေကိုပါ Bio ဒီဇယ်နှင့် မောင်းနိုင်အောင် တီထွင်ကြပါဟု ကမ္ဘာ့မီဒီယာများမှ တဆင့်လှုံ့ဆော်ပေးရဦးမည်...။ ကျွန်တော့် အလုပ်တာဝန်တွေက တကယ်ကို
များလွန်းသည်။ ဒီညကတော့ ပင်ပန်းလွန်းသောကြောင့် အိမ်ရောက်ရင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ရဦးမည်။
x x x x x x x x x x x x x x x x ။ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
အိမ်သို့ရောက်သည်နှင့် ရေနွေးနွေးလေးဖြင့် စိမ်ချိုးကာ စကော့ခ်ျဝီစကီတစ်ခွက်ကို ချလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်စားဖိုမှုးသည်မြန်မာစာ၊ တရုတ်စာ၊ ဥရောပစာ၊ အာရှစာ စသည်ဖြင့် အစုံချက်ပြုတ်တတ်သူဖြစ်သည်။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ကြိုက်သောဝက်သားမွှကြော်နှင့် ချဉ်ပေါင်ဟင်းကို ပြင်ဆင်ပေးထားသည်။ အမေရိကန် တွင် နေရစဉ်တွင်လည်း ကျွန်တော်သည် သူတို့အစားအစာ များထက် နှစ်ပေါင်းများစွာ စားသုံးလာသော ကိုယ့်အစားအစာကိုသာ နှစ်သက်လေသည်။
ညစာ စာပြီးနောက် အိမ်ရှေ့ဝရံတာတွင် ထွက်ထိုင်ကာ မအိပ်ခင် ထမင်းလုံးစီရင်း ကျွန်တော့်ဘ၀ အကြောင်းကို ထိုင်တွေးမိလေသည်။ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော်ရိုက်ချင်သော ရုပ်ရှင်ကားဟူ၍ မိမိဘလော့ဂ် တွင်ရေးလိုက်ရာ မြန်မာစာဖတ်တတ်သော ဥရောပတိုက်သားမှ ကျွန်တော့် ပို့စ်ကိုတွေ့သားပြီး သူ၏ ဘလော့ဂ်တွင် ဖေါ်ပြရာမှ ကျွန်တော့်အကြောင်းကို ဟောလီးဝုဒ်မှ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ် သူများက သိသွား ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်အကြောင်းကို စုံစမ်းပြီးနောက် အမေရိကန်သို့ခေါ်ကာ ဒီလောက်တောင်
ဆန္ဒပြင်းပြနေရင် ဒီကားကို ဦးဆောင်ရိုက်ကူးမလားဟု မေးလေသည်။ ကျွန်တော်ကလည်း မိမိမှာ အနုပညာဆန္ဒများသာ ပြင်းပြသော်လည်းနည်းပညာပိုင်းတွင် မကျွမ်းကျင်ပါသေးဟု ဆိုသဖြင့် သူတို့သည် ကျွန်တော့်အား ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများဖြစ်သော ပိုလန်စကီးတို့၊စတီဗင်စပီးဘတ် စသူတို့ထံတွင် သင်ကြား စေလေသည်။ သူတို့ထံတွင် ခဏမျှသင်ကြားပြီးနောက် ကျွန်တော်သည် အနုပညာအရရော ငွေကြေးအရပါ အလွန်အောင်မြင်မည့် ကျန်စစ်သား ဆိုသော ဇာတ်ကားကြီးအား ရိုက်ကူးလေတော့သည်။ ( ဤနေရာ
တွင် ခဏမျှသင်ရုံဖြင့် ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်ကို မဖြစ်နိုင်ဟု သံသယမဖြစ်စေလိုပါ။ မြန်မာပြည်တွင် မည်သည့်နေရာတွင်မှ သင်ကြားခြင်းမရှိပဲ အနုပညာစွမ်းရည်ပြည့်ဝ နေကြသော လူငယ်ဒါရိုက်တာလေးများ ရှိသည်ကို သတိချပ်စေလိုပါသည်။ )
ဇာတ်ကားမှာ မြန်မာဇာတ်ကားဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာသရုပ်ဆောင်များထဲမှ မင်းသား၊ မင်းသမီးသစ်များကို သုံးရာတွင်မင်းသမီးများမှာ အဆင်ပြေမူ့ရှိသော်လည်း ၊ အဓိက မင်းသားနေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန်အတွက်မူ စိတ်တိုင်းမကျသဖြင့်ဆက်လက်ရှာဖွေလေရာ အစမ်းသရုပ်ပြရာတွင် တော်လွန်းသော ကျွန်တော့်ကိုသာ မင်းသားလုပ်ပါတော့ဟု ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများက အကြံပြုလာသဖြင့် ကျွန်တော်သည် မင်းသားနေရာက သရုပ်ဆောင်ရလေတော့သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်သည်ရှေ့ကလူများ ရိုက်ကူးခဲ့သော ပုဂံဇာတ်လမ်း ရုပ်ရှင်များမှ သင်ခန်းစာယူကာ မယားလှည့်ပတ်ယူနေသော ကားမဖြစ်စေရန် ဇာတ်ညွှန်းကို သေချာခွဲလေရာ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာ၊ မင်းသား ဖားကြီး ရိုက်သော ကျန်စစ်သားဇာတ်ကား ကြီးမှာ နိုင်ငံတကာ ဆုကြီးများကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့လေတော့သည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အောင်မြင်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်တော်သည်လည်း မီဒီယာများထက်တွင် နေရာရကာ ကမ္ဘာကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့လေသည်။ ထိုမျှသာမကသေး ကျွန်တော်သည် hip-hop သီချင်းနှင့် Dj လုပ်ရခြင်းကိုလည်း ၀ါသနာပါသည်ဟုအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဖြေမိရာမှ Dj တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လာလေသည်။ Eminem၊ 50 Cent အစရှိသော နာမည်ကြီး rapperများသည်လည်း ကျွန်တော်နှင့် တွဲဖက်ကာ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နာမည်ကြီးလာသော ကျွန်တော့်အားကုလသမဂ္ဂမှလည်း သတိပြုမိကာ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး အထူးသံအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်လေသည်။ ထိုရာထူးအားလက်ခံပြီးနောက် ကျွန်တော်သည် ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်များအား ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးစဉ်များ၊ ရန်ပုံငွေပွဲများအတွက် ပေးအပ် လိုက်ပါသည်။ ထိုအတွက်လည်းကျွန်တော်ပျော်ပါသည်။ တစ်ခါကလည်း ရောဂါသည်များ ရန်ပုံငွေ အတွက် ကမ္ဘာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ ကုလသံတမန်များအသင်း နာမည်ကျော် နူးကမ့် အားကစားကွင်းကြီးတွင် ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးကန်ကြလေသည်။
လီဗာပူးအသင်း နည်းပြ ဟူလီယာမှ လာကြည့်ပြီးနောက် ကျွန်တော်သည် လီဗာပူးအသင်းအား အားပေး သူဖြစ်သူဟု သိသွားသောအခါ ထိုနေ့က ကစားခဲ့သော ကျွန်တော့်ခြေကို အလွန်သဘော ကျသောကြောင့် ကျွန်တော်သာ ဆန္ဒရှိပါက သူ့အသင်းတွင်လာရောက်ကစားကာ အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကတွင် ကျင်လည်ပါဟု လာရောက်ကမ်းလှမ်းလေသည်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအသင်းမှာ အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ၏ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်အရ ကျွန်တော့်အနေနှင့် ၀င်ကစားခွင့်မရှိသော်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား အဖြစ်ဖြင့် ၀င်ကစားမည် ဆိုပါက ဖြစ်နိုင်မည်ဟုဆိုသော်လည်း ကျွန်တော်သည် ကိုယ့်နိုင်ငံအသင်း မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ
ဆဲကာမှ ဆဲမည် ထိုကဲ့သို့တော့ သစ္စာမဖေါက်ဟု စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်မှာ တစ်ခြား အနုပညာ အလုပ်များနှင့် မအားမလပ်အောင် ရှိနေပါသဖြင့် သူ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်မခံ နိုင်သည်မှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်း အားနာနာနှင့်ငြင်းခဲ့ရလေသည်။
ထို့အပြင် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှ ၀တ္တုတိုများအားလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုကြပြီး နာမည်ကျော် စာအုပ်တိုက်များမှ ထုတ်ဝေခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်သည် ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်စရာမလိုပဲ နာမည်ကြီးသထက် ကြီးလာလေတော့သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် အကျိုးပေးထူးသော ကံကြမ္မာကို ဆန်းကြယ်လှပေတကားဟု အထင်ကြီး အတွေးပေါက်မိလေတော့သည်။ ကျွန်တော်သည် စာရေးဆရာ၊ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာ၊ မင်းသား၊ တေးရေး၊ အဆိုတော်၊ Dj Phar ဖြစ်နေပေပြီ..။ ဒါတောင် ဘောလုံးကန်ရတာ ပင်ပန်းလွန်း၍ ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
ပြန်စဉ်းစားနေရတာလည်း ကြာသွားပြီဖြစ်သည်။ မနက်ရောက်လျင် စောစောထရပေဦးမည်။ ထို့ကြောင့်အတွေးကို ဖြတ်ပြီး ကျွန်တော်သည် အိပ်ယာဆီသို့လှမ်းခဲ့ပါတော့သည်။ အိပ်ယာမရောက်ခင် ပြတင်းပေါက်မှ အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်တော့ Hollywood ဆိုသော ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို နီယွန်မီးရောင်အောက်မှာ တွေ့လိုက်ရသည်။ ဒီမှာနေရသည်မှာလူနေမူ့ အဆင့်အတန်းမြင့်ပါပေသည်။ သို့သော် LA ကို ကျွန်တော် မြန်မာပြည်လောက်သဘောမကျ....။ မီးက အမြဲလာနေသဖြင့်တစ်ရေးနိုး အပြင်ဘက်ကြည့်လိုက်လည်း လင်းထိန်နေပေသည်။ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ်မြေမှာတော့ ညရဲ့သဘာဝအလင်းရောင်ကို ခံစားနိုင်သဖြင့် ကိုယ့်မြေကိုသာ သတိရနေမိသည်။ ကဲ ကဲ..... အတွေးတွေကို တကယ်ဖြတ်ပြီး အိပ်လိုက်ဦးမှ...။
"မစ္စတာ ဖား အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို ချစ်ကြည်ရေး သံတမန်ကိစ္စနဲ့ သွားနိုင်မလား"
သာမန်အားဖြင့် ထိုကိစ္စသည် ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သာစီစဉ်လေ့ရှိသော်လည်း ကျွန်တော့်ကိုတော့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင်က လက်ခံစကားပြောနေရသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုတော့  ကျွန်တော်ကြောက်သည် ။ ထိုနေရာက မီးသည်ဘယ်အချိန်မှ ငြိမ်းမည်ကို မည်သူမျှ မသိသေး... ။ ထို့ကြောင့်.
"အင်း...အဲ... ကျွန်တော်အရေးကြီး ကိစ္စလေးတွေက ရှိသေးတယ်"
"တစ်ခြား ကမ္ဘာကျော်တွေလည်း ပါမှာပါဗျာ"
"အို... ကျွန်တော် အခုတစ်လော အလုပ်တွေအရမ်းများနေတယ်ဗျာ..
တစ်ခြားလူတွေလည်း အများကြီးပါတာပဲ ကျွန်တော်မလိုက်လို့ မဖြစ်ဘူးလား"
"မလိုက်လို့လည်းရပါတယ် ခင်ဗျားတို့က စေတနာ့ ၀န်ထမ်းတွေပဲ... ဒါပေမယ့် ပါလက်စတိုင်းလူငယ်တွေက ခင်ဗျား ဖန်တီးတဲ့ တီးလုံးတွေ ဂီတတွေကို တော်တော်လေး ကြိုက်ကြတယ်ဗျ...ဂီတဟာ အရာရာကို ငြိမ်းချမ်း စေတယ် မဟုတ်လား"
"သူတို့ကြိုက်ရင်လည်း ကျွန်တော် စီဒီခွေ တစ်သောင်းလောက်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်လေ။ လိုက်တော့ မလိုက်ချင်ဘူး"
"ဒါဆိုလည်း ခင်ဗျားသဘောပါပဲ။ ဂျက်စီကာအယ်ဘာ၊ အီမာဝပ်ဆန် နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကိုရီးယားက ဟာဂျီဝန်တို့ကတော့ ခင်ဗျားလိုက်မယ့် လေယာဉ်မှာ ပါမယ်ထင်တယ်"
ကျွန်တော်ရုတ်တရက် တွေဝေသွားသည်။ ထိုအချက်ကို ဘန်ကီမွန်းကလည်း ရိပ်မိသည်ထင်သည်။
"ခင်ဗျား မလိုက်ဘူးဆိုလည်း ခင်ဗျားအစား ထိုးဖို့ တစ်ယောက်ထည့်လိုက်လို့ ပြောလိုက်တော့မယ်.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မစ္စတာဖား ကျွန်တော်လည်း တခြားဟာလေးတွေ လုပ်လိုက်ဦးပါမယ်"
"ဟာ... တကယ်တော့ ကျွန်တော့်အလုပ်တွေက ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်လောက်တော့ အရေးမကြီးဘူးထင်တာပဲ...မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းရယ် ။ ကျွန်တော့်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော်မလေးမစားမလုပ်ချင်ဘူးဗျာ... ဒီတော့ ... ကဲ... ကဲ လိုက်မယ့်အထဲသာ ထည့်လိုက်ပါဗျာ...။ "
"အို... ခင်ဗျား မအားရင်လည်း မလိုက်ပါနဲ့ဗျာ.... "
"ဟား... ရပါတယ် ရပါတယ်... ကျွန်တော် ကျန်တဲ့အစီအစဉ်တွေ ဖျက်လိုက်မယ်... ငြိမ်းချမ်းရေး လောက်တော့ ဘယ်ဟာ က အရေးကြီးမလဲ နော"
ကျွန်တော် တကယ်လိုက်မည်ဟု အတည်ပြုပြီးတော့သူ့ရုံးခန်းထဲက ထွက်မယ်လုပ်တုန်း ကျွန်တော့်ကို
"ခင်ဗျား ဘလော့ဂ်မှာ ရေးထားတဲ့ ကမ္ဘာသစ်သီအိုရီကို ဟားဗတ်က ပါမောက္ခတွေ သီအိုရီတွေ
တွက်ထုတ်နေကြတယ်လို့ ကျွန်တော်ကြားတယ်... တစ်ယောက်ယောက် ဖေါ်ထုတ်နိုင်ရင်တော့
သူနဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ ရူပဗေဒ နိုဘယ်လ ဆုကို အတူတူ ပူးတွဲယူရဦးမယ်ထင်တယ်ဗျ"
" ဟုတ်လား... အတည်ပြုနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ.. ကျွန်တော်က တွေးပဲတွေးတတ်တာ သီအိုရီ တွေဘာတွေတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရောဘယ်လောက်ရှိလဲဗျ"
"အပုံ သန်းတစ်ရာ ပုံ တစ်ပုံလို့တော့ ကြားတာပဲ"
ဒီလောက်ဆိုမဆိုး ကျွန်တော့်ဂုဏ်သတင်းများကြားတွင် ရူပဗေဒနိုဘယ်လဆုရှင် ဟူသော နာမည်တစ်ခု
ပါထပ်တိုးလာနိုင်သည်။ ထိုသတင်းကြားပြီးနောက် ကျွန်တော်မြောက်ကြွမြောက်ကြွနှင့် ထွက်လာသည်။ ဆုရနိုင်မည် ဆိုသောကြောင့်မဟုတ်တန်ရာ... ကောင်မလေးများနှင့် ခရီးသွားရမည် ဖြစ်သောကြောင့်သာ
လေယာဉ်ပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် နာမည်ကျော်မင်းသမီး တစ်သိုက်နှင့် အဖွဲ့ကျနေလေသည်။ သူတို့က ကျွန်တော့် အနုပညာဖန်တီးမူ့များကိုအလွန်ပင်သဘောကျကြောင်း ဖြစ်နိုင်လျှင် ကျွန်တော်နှင့်ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက် တွဲရိုက်ချင်ကြောင်းပြောဆိုကြလေသည်။ကျွန်တော်သည် ထိုကဲ့သို့ မိန်းကလေးများသဘောကျစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း သူတို့က ချီးကျူးပြော
ဆိုလာရာတွင် သာယာကြည်နှုးမိသည်ကတော့ အမှန်ဖြစ်သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ရောက်ပြီ...။ ကျွန်တော်တို့သည် နှစ်ရက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဖျော်ဖြေမူ့များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်က သူတို့အား အချိန်ရသေးလျှင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သို့ တစ်ရက်မျှလိုက်လည်ရန် ဖိတ်ကြားလေရာ သူတို့က လည်း ကျွန်တော်နှင့်အတူ ခရီးသွားရမည် ဆိုပါက ငရဲပြည်သို့ပင် လိုက်မည်ဟူသော မျက်နှာထားမျိုးနှင့် လွယ်လင့်တကူပင် လိုက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြလေသည်။
သြော် ... မောင်ဖားကြီး... မောင်ဖားကြီး ယခုကြတော့လည်း ကံဇာတာများက အလွန် စန်းပွင့်လှ ပေသည်။ကျွန်တော်ငယ်စဉ် မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်စဉ်တုန်းက ကြောင်ခဲ့သော ကောင်မလေးများအား အခု အခြေအနေ ကို မြင်စေချင်လှသည်။ သူတို့နောင်တ ရကောင်းရနိုင်မည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ မြန်မာ ပြည်သို့ အစ္စရေးလေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာလာရာ တစ်နေရာ အရောက်တွင် ကျွန်တော်တို့ နောက်မှ လေယာဉ်တစ်စင်းကပ်လိုက်လာကာ အထူးလေ့ကျင့်ထားသော အယ်ကေဒါ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှန်း သူတို့လက်ထဲ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပေးဆွဲခံရသော အခါမှ သိရလေသည်။ ပျံသန်းနေသော လေယာဉ်ထဲသို့ သူတို့ဝင်ရောက်လာသည်မှာ ရုပ်ရှင်ကားများထဲကလိုပင်ဖြစ်သည်။
သူတို့စခန်းသို့ ကျွန်တော်တို့အား ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ကမ္ဘာသို့ကြေငြာကာ သူတို့လိုချင်သည်များကို တောင်းဆိုတော့လေသည်။ သို့သော် စူပါ့ စူပါ ဟီးရိုးဖြစ်သော ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့်တစ်ဖွဲ့လုံးကို ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည် သာမက အယ်လကေဒါခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင်ကိုပင် လက်ရ ဖမ်းဆီးပေးနိုင်ခဲ့လေတော့သည်။ ( အသေးစိတ်ကို မရေးပြ နိုင်တော့ပါ။ စိတ်ကူးယဉ်ရသည်မှာ ပျင်းလာပြီဖြစ်သည်။ )ဂျိန်းစဘွန်းကားများ ကိုပင်မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကာ မှန်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ ကျည်ဆံများ ဘယ်လောက်ပစ်ပစ်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပါသည်။ ကံတရားကလည်း ကျွန်တော့်ဘက်မှာသာ အမြဲနေ လေသည်။ ကျွန်တော် ရုတ်တရက်စွန့်စားလိုက်သမျှလည်း အောင်မြင်သည်။
တစ်ရက်မျှ မြန်မာပြည်ကို အလည်ခေါ်သော်လည်း မထင်မှတ်ပဲ ဘင်လာဒင်တို့ လက်ထဲတွင် လေး၊ငါး ရက်လောက် နေခဲ့ရသဖြင့် ကောင်မလေးများလည်း ကျွန်တော်နှင့် အလည်မလိုက်နိုင်တော့ပါ။ သူတို့ကတော့ အခွင့်ရလျှင် တစ်ခေါက်တော့လာလည်ပါမည် ဟုပြောကြသည်။ တိတိကျကျ ပြောရလျှင် ကျွန်တော်နှင့် ဟန်းနီးမွန်းခရီးမျိုးဖြစ်သည်ဟု နောက်သလိုလိုနှင့် ရေလာမြောင်းပေး ပြောဆိုကြလေသည်။ သို့သော် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သော ကျွန်တော်သည် သူတို့ကို ကြိုက်သော်လည်း မချစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်ချစ်သည်မှာ မြန်မာမလေးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် သူတို့မပါသော်လည်း အမိနိုင်ငံသို့သာ ပြန်လာပါတော့သည်။ အရာရာပြည့်စုံနေပြီဟု ထင်သော ကျွန်တော့်အားလည်း ကျွန်တော့်ယောက္မများက
ငြင်းစရာ မရှိတော့ဘူးဟုထင်သည်။ ဘယ်လိုပင်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်လက်ထပ်မည့်သူမှာ မြန်မာမလေး တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပေတော့သည်။
ကိုဟန်သစ်ငြိမ်တက်လိုက်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ။ ကျွန်တော်က ကိုဟန်သစ်ငြိမ် ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ရှင် shark taleထဲက ငါးလေးလိုပင် nobody ထက် somebody ဖြစ်ဖို့ပဲ စဉ်းစားနေသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း ဆိုသောခေါင်းစဉ်အား လူသောက်ညင်ကပ်လောက်အောင်ပင် ကမ္ဘာ့ ဒိတ်ဒိတ် ကျဲအဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ရေးသားလိုက်ပေသည်။တော်တော်များများလည်း ရေးပြီး ဖြစ်နေသောကြောင့် မည်သူ့ကိုမှ ဆက်လက် မ tag တော့ပါ ။
ရေးသားသူ....... မောင်ဖားကြီး 17 ယောက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်